प्रचण्डको यस्तो प्रस्तावलाई ओलीले ‘कुण्ठाग्रस्त मानसिकता’ भनेपछि पूर्व माओवादीभित्र खैलाबैला, नेताहरु आक्रोशित — Imandarmedia.com
प्रचण्डको यस्तो प्रस्तावलाई ओलीले ‘कुण्ठाग्रस्त मानसिकता’ भनेपछि पूर्व माओवादीभित्र खैलाबैला, नेताहरु आक्रोशित
काठमाडाैं । प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको कुरा गर्न कुण्ठाग्रस्त मानसिकताको उपज भएको बताएका छन्। राष्ट्रिय समाचार समितिलगायत सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई शनिबार साँझ दिएको अन्तर्वार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संसारका कुनै पनि देशमा कोरोना महामारीसँग लड्न त्यस्तो संयन्त्र नबनेको बताए।
उनलाई ‘सरकारले यी काम त गरिरहेको छ। कोरोना भाइरसको सामनाका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र गठनको कुरा पनि आएको छ तर तपाईँले किन त्यसलाई अस्वीकार गर्नुभयो?’ भन्ने प्रश्न सोधिएको थियो।
जवाफ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्- यो प्रश्न म तिनैलाई सोध्न चाहन्छु कि आज कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा कुन देशमा यस्तो संयन्त्र गठन भएको छ? विश्वका कतिपय देशमा संयुक्त सरकार छन्, कुनै अल्पमतका सरकार छन्। त्यस्तो अवस्थामा पनि कुनै मुलुकमा सरकारभन्दा माथि अर्को संयन्त्र छ? कुन प्रजातान्त्रिक वा व्यवस्थाको मुलुकको छ?
जबकि नेपालको वर्तमान सरकार दुईतिहाइ नजिकको बहुमत र जनादेशप्राप्त सरकार हो। सरकारले कोरोनाविरुद्ध चालेका कदममा सबै राजनीतिक दल, क्षेत्र र आम जनताको समर्थन र सहकार्य छ। सबैबाट आएका उपयुक्त सुझावलाई ग्रहण गर्न सरकार तयार छ। सरकारले उचित समन्वय गरिरहेको छ। सरकारले संविधान र कानूनअनुसार उत्तरदायित्व पूर्णरूपमा काम गर्छ। त्यसैका लागि जनतासँग शपथ लिएको सरकार हो यो।
अब एकाध दम्भपूर्ण अभिव्यक्ति बेग्लै कुरा हुन्। नागरिक समाज पनि राख्नुपर्ने भनिएको छ ? अनि कुन नागरिक राख्ने वा छुटाउने? त्यसो भए सबै नागरिक स्वतः सदस्य रहेको एक संयन्त्र बनाऊँ, जसको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्छ। अन्यथा मैले नेतृत्व गर्न, लोकप्रिय हुन वा गरेको देखाउन पाइनँ भन्ने अनाधिकृत र कुण्ठाग्रस्त मानसिकता मात्रै हो। यस्ता कुराहरुको कुनै अर्थ छैन।
उनले अगाडि भनेका छन् – ‘ सरकार एकजुट छ। एकताबद्ध छ। सरकार एउटै लय र तालमा अघि बढिरहेको छ। हाम्रो प्रणालीमा पुरानो ढाँचाको कर्मचारी संयन्त्र भएकाले हाम्रो गतिसँग अभ्यस्त हुनमा बिलम्ब भएको हुनसक्छ। यद्यपि, म कर्मचारीलाई दोष दिन चाहन्न। उहाँहरुले नयाँ स्पिरिट समात्न समय लागेको हुनसक्छ। पार्टी पनि एक छ। सरकारको काममा सबै नेताको समर्थन र साथ छ।
केहीले व्यक्तिगत कुण्ठा, अन्योल र दिशाहीनताले सदाबहार कराउने प्रवृत्ति देखिन्छ। हुटिट्याउँ प्रवृत्ति छ। ती कुराहरु कति सान्दर्भिक छन् ? तिनले आफैंलाई असान्दर्भिक बनाउँछन्। तिनले बिरामी प्रधानमन्त्रीले देश चलायो भन्छन्। मबाट यो भन्दा बढी के अपेक्षा गर्ने? आफैँ बिरामी भएर पनि देशलाई सङ्क्रमणबाट जोगायो भन्न पनि सकिन्थ्यो। मेरो काम गर्ने बानी छ, गरिरहन्छु ।
म अहिले पनि दैनिक १८ घण्टा काम गर्छु। मलाई जश लिनुपर्ने वा मूल्याङ्कन होस् भन्ने भावना पनि छैन। बफादारिताका साथ देश र जनताका लागि काम गर्ने हो। अराजकतालाई लोकतन्त्र ठान्ने प्रवृत्ति ठिक होइन। त्यस्ता प्रवृत्तिले पार्टीलाई नोक्सान नगरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै नोक्सान गर्छ।’
यसअघि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कोरोनाभाइरसको महामारीविरुद्ध लड्न आफू प्रधानमन्त्री भएको भए उच्चस्तरिय संयन्त्र बनाउँथे भनेर अन्तर्वार्ता दिएका थिए। प्रचण्डको प्रस्तावलाई ओलीले कुण्ठाग्रस्त मानसिकता भनेपछि प्रचण्डनिकटका पूर्व नेताहरु ओलीसंग आक्रोशित बनेका छन् । कहिले त् सामाजिक सञ्जालमा व्यंग समेत हानेका छन् ।